Ireo fotoana ahafahana mianatra manafina ao amin'ny tsy fahombiazantsika - teles relay
Ireo zavatra azo ampianarina miafina ao amin'ny tsy fahombiazantsika
Ny tsy fahombiazana dia matetika hita fa loharanon'ny mahamenatra. Raha mianatra sy mizara ny tsy fahombiazantsika kosa isika dia afaka mianatra be dia be avy amin'izy ireo.
Mahazo fifantohana bebe kokoa noho ny tsy fahombiazana ny fahombiazana. Mankalaza ny tantaram-pandresena isika ary jerena mba hahitana ireo antony nahatonga izany. Manangona ny lesona ireo indostria ary mizara azy ireo ho torohevitra ho an'ny "fanao tsara indrindra", raha toa kosa ny mpandahateny aorian'ny sakafo hariva dia mankasitraka ny mpihaino azy amin'ny hetsika noraisiny. Amin'ny lafiny iray, raha tsy nalevina tanteraka izy ireo, ny tsy fahombiazana ary ireo izay mitana azy dia matetika no raisina ho loharanom-pahamenarana na fanaratsiana.
Na izany aza dia matetika ny hadisoana, diso ary ny tampoka mivantana izay misy fampahalalana mahasoa kokoa momba ny fomba hanaovana azy tsara kokoa, raha toa ka vonona kokoa ny hizara sy handalina izany isika. Izany dia araka ny filazan'i Ayelet Fishbach sy Lauren Eskreis-Winkler, psikolojia ao amin'ny Booth School of Business ao amin'ny University of Chicago.
Mihevitra ny mpivady fa matetika dia tsy mahavita mianatra firy rehefa misy zavatra ratsy. “Mandraisa fanapahan-kevitra ratsy, izay ataontsika satria tsy mianatra ny tsy fahombiazan'ny hafa sy ny tsy fahombiazantsika. Torak'izany koa, matetika dia tsy miraharaha ireo famantarana isika fa tsy mandeha tsara ny fifandraisantsika na tsy mahafaly ny ataontsika ny lehibentsika. Tsy tokony hisoratra momba ny tsy fahombiazana izahay ary tsy manahy ny mianatra ny fomba hahombiazana, ”hoy i Fishbach.
Ny fikarohana teo aloha dia efa nanambara ny tsy fanilihana tsy ilaina amin'ny fampahalalana momba ny lesoka ankehitriny na amin'ny ho avy - olana antsoina hoe " ny akanjom-borona Avy amin'ny University of Sheffield psikolojia Thomas Webb sy ireo mpiara-miasa aminy. Na manandrana fisian'ny fahasalamana vaovao isika, mamorona tranokala orinasa na mikasa ny areti-mifindra hihatra, ny fironana ataon'ny olona dia ny mametraka ny lohanay ao anaty fasika rehefa vita ny fanolorantsika lalana. Raha tokony hanaraka ny fivoarantsika hizaha raha sendra nihena isika, dia manenika ny bala isika ary manohy manantena ny tsara indrindra.
Ny "vokatra ostrika" dia manondro ny tsy fanohizantsika ny tsy fahombiazan'ny ankehitriny sy ny ho avy, izay fihetsika tsy ilaina ela (Credit: Alamy)
Isika koa dia toa tsy miraharaha ny mieritreritra hoe inona no mety ho diso rehefa mijery ny ho avy hahatratra tanjona isika, araka ny nasehon'ny fikarohana psikolojia Gabriele Oettingen ao amin'ny Oniversite New York sy ny anjerimanontolo. avy any Hamburg. Nefa rehefa angatahina ny olona hirotsaka an-tsehatra " mifanohitra ara-tsaina - miandrandra ireo sakantsakana amin'ny fomba hahatratrarana ny tanjon'izy ireo - tsara kokoa izy ireo amin'ny faharetana sy hahatratrarany ny tanjon'izy ireo.
Tena talanjona aho noho ny firongatry ny orinasa manomana "alina mangatsiaka" - somary maro loko kokoa ny anarana ankehitriny - Ayelet Fishbach
Ankehitriny, Eskreis-Winkler sy Fishbach dia nanampy an'io literatiora io tamin'ny fampifantohana ny fahalalantsika hitandrina ny tsy fahombiazana - antsika sy ny hafa - après izy ireo no nitranga. Ao amin'ny lahatsoratra vao haingana , nangataka mpampianatra am-polony ny mpampianatra mba hahatsiaro ny fotoana voafetra rehefa nahomby tamin'ny asa sy fotoana voafetra rehefa nahomby izy ireo. Raha nanontaniana ireo mpampianatra hoe iza no tantara hoentin'izy ireo hozaraina mba hanampiana ireo mpampianatra hafa, saika ny 70% no nifidy ny hizara ny fahombiazany fa tsy ny tsy fahombiazany.
Toy izany koa no nitranga rehefa nangataka mpilatsaka an-tsitrapo an-jatony maro izy ireo hieritreritra hoe rehefa nahavita nijanona ho nifantoka tamin'ny asa izy ireo, dia rehefa tsy nahomby izy ireo ary variana. Ny maro an'isa dia nisalasala ny hizara ny tsy fahombiazan'ny fifantohany fa tsy ny fahombiazany. Ny tsy fitovizan'ny fizarana tsy fahombiazana dia mijanona ho marina na dia rehefa nangataka ireo mpirotsaka an-tsitrapo aza ny mpikaroka mba hizara amin'ny "ho avy", manome soso-kevitra fa betsaka kokoa io fihetsika io raha tsy te-hanana fahatsarana tsara amin'ny olon-tsy fantatra.
Eskreis-Winkler sy Fishbach dia mino fa ny antony lehibe iray dia ny ankamaroantsika no tsy mahatsapa hoe ahoana ny tsy fahombiazan'ny fampandrenesana. Mba hanandramana izany, dia namorona asa mateza natao hoentina hanamboarana ny tena toe-javatra izy ka ny fanalahidin'ny fahombiazana dia ny fisorohana ny hadisoana. Tian'izy ireo ny hahita raha tsy manao fizarana ny tsy fahombiazany ny mpilatsaka an-tsitrapo na dia fampahalalana kokoa aza noho ny fahombiazany.
Ho an'izany asa izany, mpilatsaka an-tsitrapo am-polony maro no nanokatra boaty mistery roa avy amin'ny telo, mba hahazoana vola. Ny boaty iray misy 20 cents, 80 hafa, raha ny farany kosa adala ary mitentina iray sous izy ireo. Avy eo izy ireo dia nanana fahafahana nizara vaovao momba ny iray amin'ireo boaty nosokafan'izy ireo hanampiana ny mpandray anjara manaraka amin'ny lalao.Hatramin'ny famporisihana azy ireo dia nilazana izy ireo fa ho afaka hanome azy ireo tsy ho ela ity mpilalao ity mitovy amin'izay amin'ny fizarana vaovao amin'izy ireo.
Ny fandinihana dia mampiseho ny fomba nanokafan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ny boaty vola virtoaly ary tsy nahita afa-tsy fahombiazana (very vola) ary fahombiazana (mahazo vola) amin'ny hafa (Credit: Alamy)
Ambonin'izany rehetra izany dia namorona zavatra ny mpikaroka ka ny mpirotsaka an-tsitrapo tsirairay avy dia manokatra boaty very sy boaty 20 cents. Midika izany, raha ny marina, dia ilaina kokoa ho an'ny mpirotsaka an-tsitrapo ny mizara ny tsy fahombiazany - izany hoe, ny toerana misy ny boaty vola very - fa tsy ny fahombiazan'izy ireo, ilay boaty 20-cent. Ny fizarana ny tsy fahombiazana dia ahafahan'ny mpilalao manaraka manadino azy, fa ny fizarana ny fahombiazana dia atahorana ho an'ny mpilalao hafa hanokatra ny boaty very. Na izany aza i Eskreis-Winkler sy Fishbach dia nahita fa, tamin'ny fandinihana maro, teo anelanelan'ny telo ampahatelony sy antsasaky ny mpilatsaka an-tsitrapo dia nisafidy ny hizara fahombiazana fa tsy ny fahombiazana - na dia ny fizarana ny fahombiazana aza dia nahasoa kokoa ho an'ny mpilalao hafa.
Tsy ny valin-kafatra momba ny chess ihany no ekena mora kokoa, fa ao anaty drafitra [ho an'ny olona] hanatratrarana ny faniriana ihany koa - i Gabriele Oettingen
Nahita porofo bebe kokoa ny mpikaroka momba ny tsy firaharahantsika ny hasarobidin'ny tsy fahombiazana amin'ny fanandramana manaraka ny fomba fanontana, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nahita ihany koa izy ireo fa mora ny manitsy ny fitenenana. Ny mpilatsaka an-tserasera an-tserasera dia nanombatombana ny dikan'ireo tandindona taloha, nifidy valiny roa mety ho an'ny tsirairay. Ho an'ny andiany iray, ny mpikaroka dia nilaza tamin'ireo mpandray anjara fa tsy manam-potoana hanomezana ny valiny izy ireo. Ny hafa indray dia nilaza tamin'ny mpikaroka azy ireo fa voavaly ny zava-drehetra. Ny tena mampibaribary dia ny hoe rehefa nanontany ny mpirotsaka an-tsitrapo ireo mpikaroka izay nahafantatra tsara indrindra ary afaka nanampy ny olon-kafa, ny 70% tamin'izy ireo dia nifidy ho an'ny seho izay tsy nahazoan'izy ireo valiny, fa tsy ny napetrany ho fantatr'izy ireo fa tsy nahomby izy ireo fa izay, noho ny endrika safidy safidy voafidy no nahafantatra ny valiny marina rehetra.
Tahaka ny asan'ny banky piggy, ny olana indray dia toa ny tsy fahalalana ny mpilatsaka an-tsitrapo momba ny fomba tsy fahombiazan'ny fampitaovana. Avy eo, rehefa nanosika ireo vondrona mpirotsaka an-tsitrapo hafa ny Eskreis-Winkler sy Fishbach fa ny fahalalana fa nahavaly diso izy ireo dia midika hoe mahalala ny valiny marina izy ireo, izay nampitombo ny fahavononon'izy ireo hizara ny fahalalany manerana ny solaitrabe. marika tsy nahomby izy ireo. azo antoka.
Ireo zava-baovao vaovao dia nanoro hevitra fa maro amintsika no mety handray soa amin'ny fampakarana tsotra ny lesona miafina amin'ny tsy fahombiazantsika.
“Aorian'ny tsy fahombiazana dia manontania, 'Inona no nianarako? Ahoana no ahafahako manao izany lesona izany amin'ny ho avy? Manoro hevitra ny Fishbach. Nanampy izy fa mety ho sarotra ny mianatra amin'ny tsy fahombiazana satria mandratra ny tenanao izy ary mila manangona ny valiny marina ianao na fomba mahasoa kokoa anaovana zavatra. “Noho izany dia tsy mila mitandrina fotsiny ianao; mila mitandrina ianao satria sarotra kokoa ny mianatra amin'ny tsy fahombiazana, ”hoy izy.
Ny fanasongadinana sy ny fiatrehana ny tsy fahampian'ny famindram-po noho ny tsikera mamela antsika hianatra zavatra avy amin'ny traikefa (Credit: Alamy)
Izy io koa dia manampy amin'ny fametrahana ny sangan'asa tany aloha, alohan'ny hanombohanao ny drafitry ny asanao na ny tanjonao manokana. Ny fikarohana nataon'i Oettingen momba ny tsy fitoviana ara-tsaina, izay itarihan'ny olona ny hahatanteraka ny tanjon'izy ireo ary avy eo miandrasa ny sakantsakana eny an-dalana, dia naneho fa ny fanatanterahana io fanombohana io am-boalohany dia mamporisika ny olona handray tsara ireo fanehoan-kevitra. ratsy avy eo.
"Tsy ny fanehoan-kevitra momba ny tsy fahombiazana hatrany no ekena fa ampiasaina ihany koa amin'ny drafitra [ho an'ny olona] hanatratrarana sy hahatontosa ilay faniriana," hoy i Oettingen. Toy ny hoe manantena ny fomba mety hitranga ny zavatra lasa mahatonga antsika hahatsapa bebe kokoa hianatra avy amin'ny hadisoana sy ny tsy fahombiazantsika rehefa mitranga izany. "Tsy vitan'ny hoe nanamboatra ny fampahalalana izy ireo, fa nampiasa azy ireo hahomby kokoa," hoy izy.
Mazava ho azy fa mety hanaratsy ny fiheveranao ny hadisoana sy ny tsy ahombiazanao, indrindra fa raha tonga lafatra ianao na mahatoky tena. Mba hiatrehana ny hadisoanao ary mianara avy aminy, dia tsy tokony ho sarotra loatra aminao.
Thomas Webb, ilay tranga "fiantraikany ostrika", dia tafiditra ao anatin'ny ekipa iray ao amin'ny University of Sheffield izay mandinika an'io olana io, ao anatin'izany ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana hikaroka fomba hanampiana ny olona handresy. tsy fahombiazana amin'ny alàlan'ny fangoraham-po. Ny ekipany dia hiara-miasa amin'ny gym, fikambanan'ny ray aman-dreny ary orinasa mpamoaka gazety - amin'ny tranga farany, manampy ireo mpamoaka lahatsoratra lahatsoratra handresy ny fironana iraisan'izy ireo.
"Ny fiheverana fototra dia ny olona maro no manakiana ny tenany rehefa mandalo izy ireo na sendra zava-tsarotra", hoy i Webb, "fa raha mahavita mamaly fangoraham-po anefa izy ohatra dia ekena fa ny tsy fahombiazana dia ampahany voajanahary. amin'ny maha-olombelona, ​​dia azo atao ny mitazona ny antony manosika sy ny ezaka [manoloana ny tsy fahombiazana]… ny ampahany amin'izany dia ny fiovana ara-kolontsaina mankany amin'ny fanekena ny tsy fahombiazana hita. "
Ny fironana tsara?
Marina ny Webb raha milaza fa misy lesona ara-kolontsaina midadasika eto. Na dia mihevitra ny tsy fahombiazana aza isika fa tsy mahomby, dia mahazo tombony betsaka isika amin'ny fanovana lehibe kokoa izay manamboatra azy ireo tsy ho loharanom-pahamenarana na hanenina ihany, fa toy ny fahafahana mianatra manankarena ihany koa.
Ny indostria sasany izay laharam-pahamehana dia laharam-pahamehana voalohany, toy ny sidina na fitsangatsanganana eny amin'ny habakabaka, efa manana io toe-tsaina io - saingy, tsy isalasalana, toe-tsaina izay tsy maintsy aparitaka amin'ny ankapobeny.
Misy famantarana marim-pototra fa manomboka amin'ny fikambanana sasany. "Manintona ahy ny fitomboan'ny firenen'ny orinasa handamina ny" fatiantoka "- somary maro loko kokoa ny anarana ankehitriny," hoy i Fishbach. "Ireo dia zavatra tsy mampidi-doza tsy azo ihodivirana ho an'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny mikrô ary hiresaka momba ny tsy mety nataony tany am-piasana."
Mila herim-po ny fanekena fa diso ianao, fa raha maro amintsika no afaka manao izany, dia hahazo tombony daholo avy amin'ny lesona nianarantsika isika.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https: //www.bbc.com/worklife/article/20200616-the-learning-opportunities-hiding-in-our-failures
'Nahamenatra sy menatra' i Burnley tamin'ny alàlan'ny sora-baventy iray nitsinkafona teny ambony kianja